FARITRA ANALANJIROFO : Tsy nahitana mararin’ny pesta intsony manerana ny hopitaly
Azo ambara fa voafehy ny valan’aretina pesta ao amin’ny faritra Analanjirofo. Tamin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra (alatsinainy antoandro) dia tsy misy olona mararin’ny pesta intsony manerana ny hopitaly ao anatin’ny distrika enina mandrafitra ny faritra Analanjirofo. 24 octobre 2017
Raha ny antontan’isa ny andron’io alatsinainy 23 oktobra io, ho an’i Fenoarivo-Atsinanana, raha 25 no nanaraka fitsaboana tao amin’ny Hopitaly Be dia sitrana avokoa izy 25 ireo ary efa nivoaka ny hopitaly namonjy ny fianakaviany avokoa.
Tsy nahitana tranga vaovao ihany koa ao Soanierana-Ivongo sy Mananara-Avaratra. Raha tsiahivina, dia nahitana trangana pesta tao Mananara-Avaratra tamin’ny 16 oktobra.
Tao Mananara-Avaratra ny alatsinainy 16 oktobra io dia olona roa no nanaraka fitsaboana ka samy efa sitrana sy efa nivoaka ny hopitaly. Ho an’i Soanierana-Ivongo indray, dia olona iray no voan’ny pesta tamin’ny talata 17 oktobra fa efa sitrana soa amantsara ihany koa. Tao Vavatenina, ny 16 oktobtra dia nisy tovolahy iray 30 taona matin’ny pesta tao amin’ny fokontany Ambolofotsy. Tao Toamasina izy io no tratran’ny aretina saingy nampodian’ny havany antsokosoko tany Vavatenina ka maty. Efa narahi-maso sy nihinam-panafody avokoa ny olona miisa 1 450 nifanerasera tamin’ilay olona matin’ny pesta tao Vavatenina io.
Izany rehetra izany no tanteraka dia vokatry ny fomba fiasa tsara rindra sy fandraisana andraikitra ataon’ny tompon’andraikitra voakasika. Samy mandray ny andraikitra manandrify azy ny rehetra. Ho an’ireo mpiambina ny sakana ara-pahasalamana (barrage sanitaire), ohatra, dia miara-misalahy amin’ny fanomezana karama ny faritra Analanjirofo sy ny sampandraharaham-paritry ny fahasalamam-bahoaka.
Fitaratra arak’izany ny ao Analanjirofo amin’ny ady atao amin’ny valan’aretina pesta eto Madagasikara. Raha tsiahivina, dia ny alakamisy 5 oktobra no nahitana trangana pesta voalohany tany Analanjirofo. Tao Fenoarivo-Atsinanana no nisian’izany. Valo ambin’ny folo andro aty aoriana, dia voafehy. Na dia izany aza, tsy mijanona ireo ezaka rehetra atao ho fisorohana ny mety ho fiverenany indray.
Mifampiankina mantsy ny ady amin’ny pesta ka na manao ezaka goavana aza ny faritra iray nefa ny faritra akaiky azy tsy mety maha voafehy ny pesta, dia ahiana hatrany ny hiverenany amin’ny alalan’ny fifamezivezena.